Tiraampi, mareen Kooriyaa Kaabaa firii dhabnaan dhiisee ba'uun mala jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Mareen Kiim Jongi-un waliin taasisuuf karoorfatame frii hin qabaatu taanaan, dhiisanii akka ba'an Doonaaldi Tiraampi beeksisanii jiru.
Ibsa gaazexessummaa Tiraampiif Shiinzoo Aabeen taasisaniin, dhiibbaan niikuleera hiiksisuu Kooriyaa Kaabaa irratti cimee akka itti fufu himaniiru.
Kana dursee, Tiraampi, daayirekatarri CIA Maayik Poompeyoo Kiim waliin akka wal argan fi walitti dhufeenya gaarii akka uuman beeksisanii turan.
Walga'ii kanarratti maaltu jedhame?
Shiinzoo fi Tiraampi ibsa kennaniin, yoo maree K.Kaabaa waliin taasisuuf karoorri qabameef firii hin qabaatu jedhanii yoo yaadan siruma akka hin deemne, yoo wlaga'an ta'es itti toluu baannaan akka dhiisanii keessaa ba'an himaniiru.
Dabalataanis duulli K.Kaabaa meeshaa niikuleraa akka hiiktu taasifame daran cimee akka itti fufu irratti mari'atamuu beeksisaniiru.
Kan biraan maaltu mari'atame?
Lameen daladala haqa qabeessa, bilisa fi hunda kan fayyadu irratti mari'ataniiru.
Garuu Ameerikaan ammas yoo waan biyya isaanii fayyadu Jaappaan fi biyyoonni kan biroo dhiheessaniin alatti miseensa waliigaltee daldalaa 'Tiraansi Paasifiik' akka hin taanes mirkaneessaniifii jiru.
Maree iccitii Daayirektara CIA fi Kiim taasisan
Goodayyaa suuraa Kaayyoon Miistar Poompeewoo (bitaarra kan jiran) maree Tiraampi fi Kiimiif haala mijeessuudha
Daayirektarri CIA (Eejansii Basaasaa Ameerikaa) Maayik Poompewoo iccitiidhaan gara Kiim Joongi waliin wal arguuf gara Kooriyaa Kaabaatti akka imalan miidiyaan Ameerikaa gabaasaa jiru.
Mareen namoota kunneenii hasaan kallattii Doonaaldi Tiraampi fi Kiim gidduutti akka taasifamuuf taasifame kun naannoo ayyaana Faasikaarra akka ture anga'aan maqaan hin dha'amne himaniiru.
Tiraampi kana dura maree olaanaa Piyoongiyaangi waliin akka taasisan ibsanii turani.
Garuu walga'iin hin eegamne kun bara 2000 booda US fi K.Kaabaa maree sadarkaa guddaa akka taasisaniif karaa saaqa jedhaeera.
Tiraampi wayita Dursaa Jaappaan Shiinzoo Aabee keessummeessaa jiranitti, ''Kallattiidhaan dhimmoota sadarkaa guddaa irratti mari'anneerra'' jedhanii turan.
Pirezidantichi, Kooriyaan Kaabaafi Kibbi waraana 1950-53'tti taasifame fi amma yoonaatti biyyoota lameen wal dhabsiisee jiru irratti mari'achuun furmaata akka itti laatan hayyama kennuu isaaniis dabaluun himaniiru.
Kooriyaan Kibbaas walitti dhufeenya biyyoota lameenii fooyyessuuf hojjachaa kan jirtu yoo ta'u, pirezidantiin biyyattii Muun Jeey dhuma Eeblaa irratti Kiim Joongi waliin wal arguuf jedhu.
Waa'ee imala kanaa maal beekna?
Poompeyoo'n battala Tiraampiin ministirummaa haajaa alaatiif kaadhimamanitti gara Piyoongi Yaangitti kan imalan ta'uu maddeen lamarraa mirkaneeffadheera kan jedhu 'Waashingitan Poosti';
Lameen waltajjii maree Tiraampiif Kiim mijeessuun alatti garuu wanta haasa'an irratti odeeffannoo heddu akka hin qabne ibsa.
Takka turees, dhugooma dhimmicha anga'oota olaanaa irraa akka mirkaneeffate Rooyitarsi gabaasee jira.
Goodayyaa suuraa Kiim Joongi-un tasa haasaaf qophii ta'uu ibsuun isaanii addunyaa ajaa'ibsiisee ture
Ameerikaa fi Kooriyaan Kaabaa akkamiin walitti haasa'u?
Ameerikaan K.Kaabaa waliin walitti dhufeenya diipiloomaasii hin qabdu. Ministirri haajaa alaa yeroo sanii Maadeliin Olbiraayit Bara 2000'tti erga KK deemaniin booda Maayik Poompeyoo anga'aa olaanaa biyyattii dawwatan kan jalqabaati.
Bara 2014'tti daayirektarri CIA yeroo sanii Jeemsi Kilaappar lammiilee Ameerikaa lama hidhamanii turan hiiksisuuf iccitiin deemanus dursaa biyyattii waliin wal hin-agarre.
Tiraampiif Kiim eessatti wal-arguu danda'u?
Ji'a darbetti Tiraampi waamicha maree kallattii Piyoongiyaangi irraa dhiyaate fudhachuun addunyaa ajab jechisiisanii turani. Pirezidantiin angoorra jiru kana taasisuunis dhimma jaboodha.
Tiraampi Waxabajjii dhufutti yookaan isa duratti mareen kun ni taasifama jedhanus bakkichi garuu Ameerikaa keessatti akka hin taanedha kan himamu.
Jarri lameen bakka waraanaan alaa K.Kaabaa fi Kibba gidduu jiru, Beeyijiingi, Awurooppaa, yookaan biyyoota Eeshiyaa kan biroo, yookaan ammoo qaama bishaanii idil addunyaa irratti ta'uu akka malu shakkiin jira.